Badala—Ngaba Niyayihlaziya ‘Imiphefumlo Ediniweyo’? | Funda
IBALI LOBOMI Ukuthobela UYehova Kundizisele Iintsikelelo Ezininzi
Zixabise Ngokupheleleyo Iimpawu ZikaYehova
Kuxabise Ukuba Nesisa Nengqiqo KukaYehova
Kuxabise Ukunyaniseka Nokuxolela KukaYehova
Vumela Ingqeqesho KaYehova Ikubumbe
Badala—Ngaba Niyayihlaziya ‘Imiphefumlo Ediniweyo’?
IMboniselo (Yokufundisa) | Juni 2013
UAngela, * udade ongatshatanga osele edlule kwiminyaka engama-30, unexhala. Kaloku ulindele ukufika kwabadala. Uzibuza into abaza kuyithetha kuye. Yinyaniso ukuba uye waphoswa ziintlanganiso ezithile, kodwa ukubila imini yonke enyamekela abantu akhulileyo kumshiya edinwe eyimfe. Ukongezelela kwiingxaki zamihla le, uxhalatyiswe yimpilo kanina enkenenkene.
Ukuba ibinguwe oza kutyelela uAngela, ubuya kuwukhuthaza njani lo ‘mphefumlo udiniweyo’? (Yer. 31:25) Noko ke, ubuya kwenza ntoni ukulungiselela ukuba utyelelo lwakho lumshiye ehlaziyekile?
CINGA NGEEMEKO ZABAZALWANA BAKHO
Sonke sikhe sidinwe ngenxa yomsebenzi okanye iimbopheleleko zebandla. Ngokomzekelo, umprofeti uDaniyeli ‘waphelelwa ngamandla’ xa wafumana umbono angawuqondiyo. (Dan. 8:27) Wancedwa kukufika kwengelosi uGabriyeli. Lo mthunywa kaThixo wamnika ukuqonda uDaniyeli, wamqinisekisa ukuba imithandazo yakhe iviwe nguYehova, wamxelela nokuba “ungonqweneleka kakhulu.” (Dan. 9:21-23) Nakuba lo mprofeti wayetyhafile, kamva womelezwa ngala mazwi engelosi akhethwe kakuhle.—Dan. 10:19.
Ngaphambi kokubatyelela ngenjongo yokubalusa, cingisisa ngemeko yabazalwana bakho
Ngokufanayo, ngaphambi kokutyelela omnye umKristu osenokuba udiniwe okanye udimazekile, chitha ixesha ucinga ngeemeko zakhe. Ziziphi iingxaki ajamelana nazo? Zimtheza njani amandla? Ziziphi iimpawu ezintle anazo? URichard, osele eneminyaka engaphezu kwama-20 engumdala, uthi: “Eyona nto ndinikel’ ingqalelo kuyo ziinkalo enza kakuhle kuzo umzalwana wam.” Wongeza athi: “Xa ucingisisa ngeemeko zabo ngaphambi kokubatyelela, uye ufumane indlela yokubakhuthaza ebafaneleyo.” Ukuba uza kuhamba nomnye umdala, zamani ukubonisana ngemeko yaloo mzalwana?
YENZANI ABAZALWANA BAKHULULEKE
Mhlawumbi uyavuma ukuba kunzima ukuchazela omnye umntu imibandela yobuqu. Umzekelo: Umzalwana unokuba neentloni ukukhupha imbilini kubadala abeze kumbona. Yintoni ke onokuyenza ukuze akhululeke? Uncumo olunyanisekileyo namazwi ambalwa akhuthazayo anokumnceda. UMichael, osele egqibe iminyaka engaphezu kwama-40 engumdala udla ngokuvula ngala mazwi: “Yazi, elinye lamalungelo amnandi umdala analo kukutyelela abazalwana bakhe emakhaya ukuze abazi kakuhle. Bendikhangele phambili ke nakolu tyelelo lwanamhlanje.”
Ninokukhetha ukuqala ngomthandazo kutyelelo lwenu. Kwimithandazo yakhe, ngokufanelekileyo umpostile uPawulos wakhankanya ukholo, uthando nokunyamezela kwabazalwana bakhe. (1 Tes. 1:2, 3) Xa uchaza indlela ovakalelwa ngayo ngeempawu ezintle zomzalwana wakho, eyona nto uyenzayo ulungisa intliziyo yakho neyakhe ukuze nincokole kakuhle. Namazwi akho anokuba negalelo elihle. Umdala osele enamava uRay uthi: “Maxa wambi, siyazilibala izinto ezintle esizenzileyo. Ngoko, xa umntu esikhumbuza ngazo, sitsho sihlaziyeke.”
BANIKE ISIPHIWO SOKOMOYA
NjengoPawulos, unokubanika “isiphiwo sokomoya” ngokuxubusha iSibhalo esithile, nokuba yivesi enye. (Roma 1:11) Ngokomzekelo, umzalwana odandathekileyo unokuziva engento yanto, njengomdumisi owazifanisa ‘nentsuba entshwenyileyo emsini.’ (INdu. 119:83, 176) Emva kokugqabaza ngesibhalo eso, unokumchazela ukuba uyayazi into yokuba ‘akayilibalanga’ imithetho kaThixo.
Eny’ into onokucinga ngayo enokukhuthaza udade opholileyo okanye ophelelwe yinzondelelo ekukhonzeni uThixo, ngumzekeliso weBhayibhile wengqekembe yedrarhma elahlekileyo. (Luka 15:8-10) Loo ngqekembe isenokuba yayiyenye yeengqekembe zesilivere ekwenziwe ngazo inekleyisi. Ngokuxubusha naye loo mzekeliso, usenokumnceda aqonde ukuba uyinxalenye exabisekileyo yebandla lamaKristu. Emva koko, unokubethelela indlela axatyiswa ngayo nguYehova njengemvu yakhe encinane.
Abazalwana bethu badla ngokukuvuyela ukuxubusha ngezinto abazifunde eBhayibhileni. Ngoko ke, musa ukuthetha wedwa! Emva kokufunda ivesi ephathelele imeko yakhe, unokukhetha igama okanye ibinzana elithile kuloo vesi uze umcele agqabaze ngalo. Ngokomzekelo emva kokufunda eyesi-2 kwabaseKorinte 4:16, umdala unokubuza oku, “Ngaba ukhe wacinga ngendlela uYehova ‘akwenza mtsha’ ngayo wena?” Le ndlela inokukhokelela ekubeni ‘nikhuthazane’ ngokwenene.—Roma 1:12.
Abazalwana bethu badla ngokukuvuyela ukuxubusha ngezinto abazifunde eBhayibhileni
Enye into enokuhlaziya umzalwana wakho kukuxubusha ngomntu othile ekuthethwa ngaye eBhayibhileni owayekwimeko efana neyakhe. Umntu odandathekileyo unokuziva efana noHana okanye uEpafrodito, abakhe baxinezeleka kodwa bahlala bexabisekile kuThixo. (1 Sam. 1:9-11, 20; Fil. 2:25-30) Mininzi imizekelo emihle eseBhayibhileni onokuyisebenzisa xa iimeko zivuma.
QHUEBEKA UBONISA UMDLA
Emva kokubatyelela abazalwana noodade, qhubeka ubonisa umdla kubo. (IZenzo 15:36) Ngokomzekelo, xa uqukumbela utyelelo, unokuceba ukuya naye entsimini. UBernard, umdala onamava, xa edibana nomzalwana ebesandul’ ukumtyelela, ngobuchule uye ambuze enoba limncedile kusini na icebiso alinikiweyo. Ngokubonisa loo mdla, uya kukwazi ukubona enoba kusafuneka olunye uncedo kusini na.
Eyona nto bayifunayo abazalwana noodade wethu kukuziva bekhathalelwe, beqondwa yaye bethandwa. (1 Tes. 5:11) Ngoko ke, ngaphambi kokubatyelela ngenjongo yokubalusa, cingisisa ngemeko yabo. Thandaza ngaphambi kokuya kubo. Khetha izibhalo ezifanelekileyo. Uya kutsho uwafumane amazwi afanelekileyo anokuhlaziya ‘imiphefumlo ediniweyo’!
^ isiqe. 2 Asilogama lakhe.
IMBONISELO (YOKUFUNDISA) Juni 2013